Andalusia bụ otu n'ime ebe mmemme kachasị ewu ewu na Europe
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Spain » Andalusia bụ otu n'ime ebe mmemme kachasị ewu ewu na Europe
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Andalusia na-enye ọtụtụ ohere maka mmemme. Andalusia, na mpaghara mpaghara Cadiz, bụ otu n'ime ebe mmemme kachasị ewu ewu na Europe yana akụrụngwa ya mepụtara nke ọma.
Andalusia na mpaghara Cadiz bụ mpaghara ndịda nke obodo 17 kachasị na Spain ma ọ dị na ala. Andalusia gbara Castile-La Mancha na Extremadura na mgbago ugwu ya na Oke Osimiri Mediterenian na Oke Osimiri Atlantic na ndịda ya. Murcia dị n’ọnụ ụzọ ya nke ọwụwa anyanwụ na Portugal n’ọdịda anyanwụ.
The Mpaghara Cadiz Karịsịa abụrụla ebe na-arụsi ọrụ ike maka ihe omume na ndị na-akpali akpali na-akwado ihe ruo ọtụtụ afọ. Nke a gụnyekwara ndị na-emepụta ụgbọ ala. Kedu onye odeakụkọ ụgbọala na-agabeghị na mpaghara Cadiz? Otú ọ dị, ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị, ọ bụ "amaghi" Andalusia, dịka ọmụmaatụ Costa de la Luz ("Coast of Light"), nke gbatịrị n'akụkụ ụsọ Oké Osimiri Atlantic site n'ọnụ Guadiana na ókèala Spanish na Portuguese na Tarifa na Ọwara nke Gibraltar.
Costa de la Luz bụ ụbọchị ihu igwe 360 ​​ụbọchị n'afọ. A pụkwara ịchọta okpomọkụ dị ka oge oyi n'oge oyi - ọ bụ naanị ihe dị ka awa 3.5 site na ụgbọelu si Germany. Ọnọdụ okporo ụzọ zuru oke, na-achọsi ike maka ihe omume ụgbọ ala, nke a na-enwekarị ebe a. Dum netwọk netwọk ka e ọhụrụ na-amụba na-adịbeghị anya. Maka ụdị ụgbọ ala ọ bụla - ma ọ bụ ụkwụ anọ, ụgbọala egwuregwu, limousine ma ọ bụ ụgbọ ala azụmahịa na gwongworo - enwere ọnọdụ ụzọ ziri ezi: Serpentines, okporo ụzọ ndị dị n'akụkụ oké osimiri, ụzọ mpụga na ọbụlagodi agbụrụ agbụrụ dị na Cadiz mpaghara.
Highzọ awara awara, okporo ụzọ na ụzọ mba na-eburu gị site na ọdịdị a na-akọwabeghị na mbara ala na-emepebeghị emepe, nke na-agaghị agbanwe ma ọlị n'ihi ọnọdụ siri ike ndị ọchịchị nyere. Agaghị ewu ụlọ nkwari akụ dị elu karịa nkwụ, nke dị ihe dị elu okpukpu abụọ. N'etiti ụlọ nkwari akụ ọ bụla na oké osimiri n'ozuzu ha bụ ebe nchekwa ihe okike.
Nweta na Mpaghara Cadiz na Costa de la Luz nwere ike ịhazi site na ọdụ ụgbọ elu Jerez.
More nke Cadiz
Gastronomic na-enye Cadiz
Onyinye ọdịbendị nke Cadiz
Wineries (nakwa maka ihe omume)